तपाइँको कम्प्युटरमा संगीत वा भिडियोको साथ सीडी कसरी जलाउने ग्याजेट समाचार
जस्तो कि हामीले पहिले नै एक मा टिप्पणी गरेका छौं टेक्नोलोजी गाइडमा लेख जहाँ हामीले देखायौं हाम्रो संगीत सीडीहरू एमपी to मा रूपान्तरण गर्न सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रमहरू, शारीरिक ढाँचा अलि अलि गर्दै मर्दैछ। डिस्कहरूको लागि समर्थनसहित यन्त्रहरू भेट्टाउन गाह्रो हुँदै गइरहेको छ, प्रवृत्ति डिजिटल सामग्री हो। यति धेरै, कि लगभग कुनै कार डिस्क समर्थन संग आउँछ, र न त ल्यापटप गर्दछ।
बजार स्ट्रिमि or वा मांग मा सामग्री, जहाँ नेटफ्लिक्स, Spotify वा अमेजन प्राइम को रूप मा सेवाहरु बाहिर खडा, जो संगीत र भिडियो सेवा दुबै अंक छ। तर यदि हामी ती मध्ये एक हो जसले हाम्रो रेकर्डरको फाइदा लिन हाम्रो भिडियो वा डिस्कमा हाम्रो संगीत प्रयोग गर्न चाहान्छौं भने, हामीसँग यी धेरै सरल तरीकाले रेकर्ड गर्न धेरै उपयुक्त कार्यक्रमहरू छन्। हामीलाई केवल डिस्क बर्नरको साथ बाह्यको खरीद गर्नको लागि कम्प्युटर चाहिन्छ।
1 हामी के रेकर्ड गर्न सक्छौं र केको लागि?
2 विन्डोजमा डिस्कहरू जलाउन प्रोग्रामहरू
2.2 ALCOHOL १२०%
2.4 डेमन उपकरण लाइट
2.5 विन्डोज मिडिया प्लेयर
3 म्याकोसमा डिस्कहरू जलाउने कार्यक्रमहरू
3.1 एक्सप्रेस बर्न
हामी के रेकर्ड गर्न सक्छौं र केको लागि?
हामी भन्न सक्दछौं कि यो एक बिर्सिएको कला हो, त्यस समयमा हामी खाली कम्प्युटरमा जलाउनको लागि खाली डिस्कहरूद्वारा घेरिएका थियौं; यति धेरै कि जुनसुकै सानो पसलमा, हामीले किनमेल गर्न रेकर्डहरू भेट्यौं; यी सबै स्ट्रिमिंग वा माग गरिएको सेवाहरूको कारण पृष्ठभूमिमा रिलिजेट गरिएको छ किनकि हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसक्यौं।
तैपनि, यसले हाम्रो मनपर्ने संगीत डिस्कहरू वा चलचित्रहरू सुरक्षित गर्न अर्को विकल्प पाउन कहिले पनि चित्त दुखाउँदैन जुन हामी केवल आनन्द लिन चाहान्छौं तर मूल बजारलाई यसको बक्समा राख्दै। ओह प्रोग्रामहरू वा प्रस्तुतीकरणहरू जुन हामी स्थानहरूमा ट्रान्सपोर्ट गर्न चाहन्छौं जहाँ हामीसँग कम्प्युटरमा पहुँच छैन तर एक प्लेयर हो (केहि बढ्दो असामान्य)। हामी CD, DVD वा BLU-RAY मा कुनै पनि प्रकारको फाईलको रेकर्डि undert गर्न कार्यक्रमहरूको चयन सिफारिस गर्न गइरहेका छौं।
विन्डोजमा डिस्कहरू जलाउन प्रोग्रामहरू
यो सबै भन्दा पुरानो कार्यक्रमहरू मध्ये एक हो, संक्षिप्त इन्टरफेसको साथ र समयको साथ केहि अप्रचलित, तर धेरै सहज र सरल। यो कार्यक्रमले हामीलाई कल्पना गर्न सक्ने कुनै पनि कुरा रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ, हामीलाई चाहिएको ढाँचा र सबै भन्दा राम्रो यो पूर्ण रूपमा नि: शुल्क हो।
यो विन्डोजको कुनै पनि संस्करणसँग उपयुक्त छ, विन्डोज 95 from देखि सबैभन्दा अप-टु-डेट विन्डोज १० लाई। यसले हामीलाई कुनै पनि भौतिक माध्यम रेकर्ड गर्न अनुमति दिनेछ, सब भन्दा असामान्य जस्तो कि XBOX (360० (HD DVD) द्वारा प्रयोग गरिएको ढाँचा।
हामीसँग डिस्क एक पटक जलाइएको संभावना छ, यसलाई सफ्टवेयर मार्फत प्रमाणित गर्नुहोस् १००% सुनिश्चित गर्न को लागी यो कुनै पनि पाठकमा पूर्ण पढ्न योग्य छ। हामी बफरको आकार परिमार्जन गर्न सक्दछौं वा डिजिटल हस्ताक्षरको साथ हाम्रो डिस्क ईन्क्रिप्ट गर्न सक्दछौं।
यो मा LINK हामी प्रोग्राम डाउनलोड गर्न सक्छौं।
भर्चुअल ड्राइभहरू वा क्लोनिंग छविहरू सिर्जना गर्नका लागि उत्तम विकल्पको अभिप्रायले कार्यक्रम विकसित भयो। यो असंख्य ढाँचाहरू सहित उपयुक्त छ: mds, iso, bwt, b5t, b6t, ccd, isz…। यो निस्सन्देह दिमागमा आएको कुनै पनि कुराको ब्याकअप प्रतिलिपिहरू सिर्जना गर्नका लागि आदर्श हुनेछ। उदाहरणको लागि, हामीलाई विन्डोज स्थापना गर्न सीडीको प्रतिलिपि चाहिन्छ; यो प्रोग्रामको साथ हामी यसलाई केही मिनेटमा गर्छौं।
अल्कोहल १२०% सँग, सबै डिस्क क्लोनिंग केही साधारण चरणहरूको कुरा हो, जुन यसको मार्फत साधारण इन्टरफेस कुनै पनि प्रयोगकर्ताले चाहे कसरी अनुभवहीन हुन सक्छ।
यो मा LINK हामी यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छौं।
अर्को पुरानो, पुरानो कार्यक्रम, एक इन्टरफेसको साथ, जुन पुरातात्त्विक र संक्षिप्त भए पनि यति राम्ररी व्यवस्थित गरिएको छ कि यो धेरै सरल र सहज छ। कुनै पनि भाषा उपलब्ध छ त्यसैले भाषा कुनै पनि प्रयोगकर्ताको लागि समस्या हुने छैन। कार्यक्रम कुनै पनि प्रकारको रेकर्डिंगमा केन्द्रित छ, हामी ट्र्याकहरूको संकलन सिर्जना गर्न सक्दछौं MP3, AAC, WAV, FLAC वा ALAC.
जे होस् हामी के गर्न सक्छौं केवल फाईलहरूको प्रतिलिपि बनाउनु भनेको मानौं यो पेन ड्राइभ हो। यी सबै दुबै सीडी र डीभिडी मार्फत गर्न सकिन्छ। सन् २०००, XP बाट विन्डोज १० मा सबै विन्डोजको संस्करणहरूसँग उपयुक्त। योसँग एक इन्टिग्रेटेड प्लेयर छ, तर कुनै श doubt्का बिना यो हामीले प्रयोगलाई गर्ने छैनौं, तर यो त्यहाँ छ।
डेमन उपकरण लाइट
यो को लागी प्रो उत्कृष्टता कार्यक्रम हो "सिर्जनाकर्ताहरू" सामग्री को। यसको मुख्य कार्य अडियो वा भिडियोको लागि डिस्कहरू जलाउनु होइन, बरु यो भर्चुअल छविहरूको सिर्जनामा ​​केन्द्रित छ, जस्तै आईएसओ। हामीले अहिले सम्म पोस्ट गरेका सबै मध्ये, यो निस्सन्देह एक सबैभन्दा आधुनिक इन्टरफेसमा रमाईलो एक हो, म पूर्ण सूचीको बारेमा पनि भन्नेछु, तर समान सहज र सरल।
मानौं यो प्रोग्राम हो भिडियो गेमहरू वा फिल्महरू रेकर्ड गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त, उदाहरणका लागि, दुबै डीभीडी र BLU-RAY मा। यसले हामीलाई आवश्यक भएमा यसलाई धेरै पार्टिसनहरूमा गर्न अनुमति दिन्छ। नि: शुल्क संस्करण विज्ञापन समावेश गर्दछ, तर यदि हामीले हाम्रो जेबबाट पैसा तिर्ने छैनौं भने यो तिर्नुपर्ने मूल्य हो। यद्यपि हामीसँग खरीद गर्न विकल्प छ असीमित आजीवन लाइसेन्स मात्र € 4,99। को लागि, जसले हामीलाई यसलाई computers कम्प्युटरमा स्थापना गर्ने सम्भावना दिनेछ।
हामी यसमा प्रोग्राम डाउनलोड गर्न सक्छौं LINK.
विन्डोज मिडिया प्लेयर
हो, हामी विन्डोज स्थापना गरेको छ भने हामी हाम्रो कम्प्युटरमा केहि पनि स्थापना बिना एक संगीत डिस्क जलाउन सक्छौं। विन्डोज XP बाट १० सम्म, यो एक उपयोगी सुविधा जुन विन्डोज मिडिया प्लेयरको साथ आउँदछ।
कुनै श .्का छैन यो ती विकल्पहरूको लागि जसलाई केवल sporadically अनौठो संगीत सीडी रेकर्ड गर्न आवश्यक छ। किनकि यो धेरै सीमित छ र मुश्किलले तपाईंलाई रेकर्डिंगका लागि विकल्पहरू दिन्छ, यद्यपि यो उत्तम रूपमा काम गर्दछ र यसको प्रतिलिपिको गुणवत्ता पनि राम्रो छ। सबै भन्दा राम्रो, हामी कुनै अतिरिक्त स्थापना वा डाउनलोड गर्न छैन।
म्याकोसमा डिस्कहरू जलाउने कार्यक्रमहरू
हामीहरू जो स्याउ उत्पादनहरू प्रयोग गर्दछौं हाम्रो पनि आफ्नै डिस्कहरू जलाउने अधिकार छ, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई म्याकोएस अपरेटिंग सिस्टममा बनाउनका लागि केही विकल्पहरू पनि दिनेछौं। विविधता कम व्यापक छ तर हामी विकल्पहरू कि हामीसँग विन्डोजमा भए जस्तो राम्रो छ मजा लिन सक्छौं।
हामी मेरो लागि के साथ शुरू गर्दछौं सबै भन्दा राम्रो विकल्प; यसको नाम, यसले स indicates्केत गर्दछ, यसको गति दर्शाउँछ, त्यसैले यो एक कार्यक्रम हो जसले हामीलाई औसत भन्दा उच्च गतिमा डिस्क रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ। हामीसँग उत्तम गुणवत्ताको ग्यारेन्टी गर्न तिनीहरूलाई कम गतिमा रेकर्ड गर्ने विकल्प छ सम्भव छ।
हामी सम्पूर्ण सूचीको एक पूर्ण अनुप्रयोगहरूको सामना गर्दैछौं। हामी भिडियो AVI वा MPG मा रेकर्ड गर्न सक्छौं। DVD पुस्तकालयहरू सिर्जना र प्रबन्ध गर्नुहोस् र नेभिगेसन मेनूहरूका लागि टेम्प्लेटहरू परिमार्जन गर्नुहोस्। हामी हाम्रो रेकर्डि toमा वाटरमार्कहरू समाहित गर्न सक्छौं, हामीसँग PAL वा NTSC मा भिडियो फाइलहरू रेकर्ड गर्ने सम्भावना पनि छ, साथ साथै Panoramic स्क्रीनहरूको पक्ष अनुपात परिवर्तन गर्ने।
यो यसको नामले सुझाव दिए जस्तै सरल छ। दुबै सीडी र डीभीडीहरू जलाउनुहोस्। अपरेटि system प्रणालीको कुनै पनि संस्करणमा चल्दछ MacOS X क्याटालिना जस्तै। यसले हामीलाई अभिलेख डिस्कहरू, स disc्गीत डिस्कहरू, कम अन्तर्क्रियात्मक सिर्जना गर्न, गुणा डिस्कहरू र अधिक बढाउन अनुमति दिन्छ।
यो एक सरल प्रोग्रामिंग हो जुन ईन्टरफेसको साथ मैत्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सजिलो छ किनकि यो सरल र न्यूनतम हो। केवल नकारात्मक पक्ष हामी यो सफ्टवेयरमा फेला पार्दछौं कि डीभीडी बर्न गर्दा यो आवश्यक हुन्छ कि भिडियो ढाँचा .mpg हो। यो कार्यक्रमले स्वचालित रूपमा .mpg मा फाइलहरू रूपान्तरण गर्ने कुरा विचार गर्दा ठूलो समस्या छैन; जे होस्, यसको लागि हामीले केहि समय पर्खनु पर्नेछ, जबकि रूपान्तरण रेकर्ड गर्नु अघि।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » तपाईंको कम्प्युटरमा संगीत वा भिडियोको साथ सीडी कसरी जलाउने